Iimbono ezimangalisayo zeBay kwiTe Haumi
Igumbi lakho lokulala e indlu ekumhlaba osikelwe izindlu sinombuki zindwendwe onguBernd
Indlu ibekwe ePaihia kwindawo ezolileyo yeTe Haumi ejonge kwiBay of Islands. I-Te Haumi yimizuzu emi-4 ukusuka kwilali yasePaihia kunye neelwandle zayo, iindawo zokutyela ezininzi kunye ne-wharf yokukhenketha ngesikhephe kwiBay of Islands. Isikhitshane semoto esiya eRussell sikumganyana nje ongephi ukuya eOpua. Isitudiyo seendwendwe sisemva kwendlu kwaye siyakonwabela ukubonwa kwehlathi kwaye sinemibono emangalisayo ngaphaya kwebhayi ukuya kuRussell. Uya kuba nomnyango wakho wokungena, idesika yabucala kunye negumbi lakho lokuhlambela le-en-suite.
Nceda uqaphele ukuba igumbi ngoku licocwe ngokwemigaqo ye-Covid19. Ndigonywe kabini ngokwam kwaye indawo yeendwendwe yohlulwe ngokupheleleyo kwindlu yonke. Ukujonga imithetho yokungena ekuhlaleni iya kusetyenziswa ngokufanelekileyo ngelo xesha. Igumbi elisandula ukuhonjiswa linebhedi enkulukazi, iti kunye nezixhobo zokwenza ikofu, iisiriyeli, ifriji nendawo yokuhlala, iWiFi yasimahla, iFreeview satellite TV kunye nokuhamba kwiwodrophu. Indlu inesixokelelwano sokungena komoya sokutshintshiselana komoya rhoqo kwaye iifestile zegumbi lakho zinezikrini zezinambuzane. Ungasonwabela isidlo sakho sakusasa okanye iglasi yewayini kwindawo yakho yabucala ngelixa ufunxa indawo entle. Unokonwabela iimbono ukusuka kwintuthuzelo yebhedi yakho! Bukela kwaye umamele iintaka zomthonyama ezifana neTui, amahobe omthi kunye nezinye kwindawo yazo yendalo. Uxolo akutshaywa kwizakhiwo.
4.91 ·Izimvo eziyi-57
Ubumelwane beTe Haumi buthandwa kakhulu ngenxa yendawo ethe cwaka kunye nemibono emihle. Ngelixa ukufutshane nayo yonke i-Paihia kufuneka inikezele ngokude ngokwaneleyo kude ne-hustle kunye nokuxakeka ngexesha leenyanga zasehlotyeni ezixakekileyo.
Ezinye iindawo ezikufutshane ziiNgxangxasi zeHaruru, amabala eSivumelwano saseWaitangi kunye nekhosi entle yeGalufa yaseWaitangi, zonke zingaphakathi kwe-10min yokuqhuba. I-Kerikeri eneengxangxasi ezininzi kunye neNdawo yogcino lwelitye lembali kukumgama we-25min kuphela.
Cylists banokukhetha kakuhle wamisa iMountain Bike Park e Waitangi okanye indawo yokuqalisa iTwin Coast Discovery bike trail e Opua (3km ukusuka kwipropati) ekhokelela yonke indlela eya kunxweme olusentshona eHorere.
Kuxhomekeke kwixesha lakho lokufika ndingaba khona ukuze ndikwamkele ngokwam. Ndihlala ndijikeleze kamva emini ukuze ndincede ngayo nayiphi na imibuzo ukwenza ukuhlala kwakho kwiBay yeZiqithi ezintle kube mnandi kangangoko.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Paihia